Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka Oromia oo Fashiliyay Dhagar Ay TPLF Soo Maleegtay.
Shacabka Oromia oo Fashiliyay Dhagar Ay TPLF Soo Maleegtay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Matu ee Gobolka Oromia ayaa sheegaya in ay dadka shacabka ah ee deegaanku fashiliyeen dhagar wayn oo ay maleegaysay xukuumada wayaanuhu.
Sida xogta aan kuhelayno shacabka magaalada Matu ayaa qabtay koox kamid ah ururka TPLF oo howlo shacabka iyo deegaanka kadhan ah kudiyaarinayay Hotel kamid ah kuwa magaalada Matu, waxayna dad waynuhu kawar heleen kooxda oo diyaarisay qaraxyo ay doonayeen in ay dad shacab ah kulaayaan.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay kooxdu doonaysay in ay qaraxan usaariso Jabhada Xoraynta Oromia OLF, waxayna kooxdu diyaarisay calaamadaha Jabhada lagu yaqaano sida calanka iyo waliba astaanta Jabhada OLF.
Kooxdan oo laga soo diray magaalada Addis Ababa ayaa doonayay in ay kala dilaan Jabhada OLF iyo shacabka Oromia kuwaas oo xidhiidhkoodu uu aad ufiican yahay, waxayna kooxdu kurajo waynayd in ay kadib markay dadka xasuuqaan ku eedeeyaan Jabhada OLF.
Kooxda laqabtay ayaa lasheegayaa in ay qoreen waraaq ay kumuujinayaan Jabhada OLF oo qaraxa sheeganaysa iyo calaamadaha jabhada oo ay doonayeen in ay kudaadiyaan agagaarka meesha uu qaraxu kadhacay.
Dadka deegaanka ayaa dhagarta kooxda TPLF ee lafashiliyay kutilmaamay wax ilaahay lagu mahadiyo, waxayna dadwaynuhu ogaadeen colaada ay kooxdu uqabto dadka shacabka ah ee ree Oromia.
Ma aha markii ugu horaysay ee xukuumada wayaanuhu ay qaraxyo umaleegtay shacabka isla markaana ay ku eedeeysay jabhadaha hubaysan ee wadanka kadagaalama arintaas oo ay kubanaysanayaan dhiiga shacabka.